ASMARA - Dowladda Eritrea ayaa dib ugu soo laabaneysa xubinimadeeda Urur goboleedka IGAD Todobaadka dambe, iyadoo munaasabad arintaasi lagu shaacinayo lagu qaban doono Addis Ababa, sida ay sheegtay Wakaaladda wararka Itoobiya ee FANA.
Eritrea ayaa hakad geliysay xubnimadeeda IGAD sanadkii 2007-dii, inkastoo ay dib ugu soo laabatay 2011-kii, laakiin waxay mar kale isaga baxday 2017-kii, waqtigaasoo arrimo xasaasi ah ay jireen.
Shir uu Ururka IGAD ku yeelan doono labo isbuuc kadib magaaladda caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa looga dhawaaqi doonaa inay Eritrea dib usoo ceshatay xubinimadeeda.
Kulanka ka dhaca Addis Ababa ayaa waxaa uu ku saabsan soo afjaridda colaada gaamurtay ee dalka Suudaanta Koonfureed, laakiin dadaalo badan kadib lagu guulaystay in heshiis ay ka gaaraan dhinacyada isku haya.
Heshiiska lagu saxiixi doono bisha dambe Magaalada madaxda dalka Itoobiya ayaa noqonaya saxiixii ugu dambeeyay ee nabadda dalka Suudanata Koonfureed oo ah kan ugu yar Kownkaan.
Kusoo laabashadda Eritrea ee Ururka IGAD ayaa timid kadib markii ay heshiis lagu soo gabagabaynayo colaadda ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo Eritrea, kaasoo uu hogaaminayo Abiy Axmed.